Sombin'akoho miaraka amin'ny dipoavatra mena sy amandy | Bezzia
Androany dia manolotra fomba fahandro tsotra sy haingana izahay, tonga lafatra hamenoana ny menio andro faran'ny herinandro. Akoho amam-borona sasany miaraka amin'ny dipoavatra mena sy amandy izay mamela anao hanolotra ny sakafo eo ambony latabatra ao anatin'ny 20 minitra mahery ary handresy ny olon-drehetra.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ity recette ity dia ny malefaka be. Tahaka ny nampiasanay ny akoho dia afaka mampiasa hena hafa ianareo, trondro na proteinina legioma mihitsy aza toy ny tofu na tempe. Aza adino, eny, tsy maintsy manamboatra ny fotoana ianao mba handrahoana sakafo tsara.
Ny ampahany lehibe indrindra amin'ity recette ity ary ilay izay hitondra anao lava indrindra dia ny fanomanana ny tobin'ny legioma. Ao Bezzia dia tianay ny mahandro mandritra ny 15 minitra farafahakeliny mba hanalefahana ny tongolo ary manomboka mahazo izany firafitra izany alohan'ny caramelizing sy ketrona voatabia serizy. Ho sahinao ve ny manandrana azy?
Menaka oliva 3 sotro fihinanana
Tongolo lehibe 1, julienned
Dipoavatra mena 1, voadidy
Jirofo tongolo 1, voadidy
Voatabia serizy 10, antsasaky ny antsasaky
1/2 tratra akoho lehibe
Vovoka tongolo lay
Voatabia masaka 1, voatoto
Ron-kena akoho 1 vera
Amandy voadio vitsivitsy ⠀
Afana ao anaty vilany ny menaka oliva ary poach ny tongolo, dipoavatra, tongolo lay ary serizy mandritra ny 15 minitra farafahakeliny.
avy eo arotsaka amina akoho, efa zatra ary nofafazana vovoka tongolo kely.
Arotsaka ao anaty kaserol ihany koa ny rosemary vaovao sarony ilay voatabia voatoto ary ny ron-kena akoho. Sarony ny kaserola ary andrahoy mandritra ny telo minitra.
dia ahodino ny sombin'akoho ary mahandro roa minitra fanampiny tsy misy sarony.
Vantany vao vita ny hena, ampio ny amandy amin'ny kaserol ary atolory tapa-mena sy amandy ny ravina akoho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Carnes » Sombin'akoho miaraka amin'ny dipoavatra mena sy amandy
Ahoana ny fomba hamoronana ny masonao ary hahazoana ny mety indrindra raha manao solomaso ianao